Banyere Anyị - Fancyco Co., Ltd
Ụtaba wrapping ihe
Product ozi ọma
Business ozi ọma
Fancyco a hụrụ na 2004. Anyị ụlọ ọrụ ghọrọ a ọlaedo soplaya na Alibaba karịrị afọ 14. Ọ bụ a dị ịrịba ama mgbanwe na 2005 nke anyị nwere onwe anyị factory. Na 2015 Fancyco ọma banyere Nigeria na Uganda ahịa na melite No.1 ika nke ihennyapade akwụkwọ na ọcha na ngwaahịa na ná mba ndị a. Ugbu a, anyị na-pụrụ iche na mbukota na-ebi akwụkwọ ihe. N'ọdịnihu, anyị ga-etinye mmasị nke ndị ahịa na-egbo mkpa nke ndị ahịa na nke mbụ, itinye onwe anyị na-eju afọ ahịa 'chọrọ na-atụ anya, na-enye ezigbo ọrụ gị.
Anyị laabu nwere a ọkachamara nnyocha mkpara, nkwa na àjà ahịa ruru eru ngwaahịa dabeere na elu testing equipments. All mkpara gafere ule nke mba nnyocha nzere ma ọ bụ ụlọ ọrụ nzere nyochaa. Company itinye ego ọtụtụ nde ego ịzụta elu QC equipments, gụnyere gbazee Flow Speed ​​egosi, ink dee esemokwu egosi, American Aglient Gas Chromatogram Instrument, Mmiri Meter, American X-Rite Spectrophotometer na na. Ndị a elu equipments na ụkpụrụ dị elu QC usoro na-ekwe nkwa ụlọ ọrụ a nchekwa ụzọ na-aga n'ihu na ngwaahịa ọhụrụ na mmepe.
The ụlọ ọrụ bụ isi ngwaahịa nwere ike kewara abụọ ige: onye na-mbukota na-ebi akwụkwọ ihe (na-agụnye: aseptic ngwugwu, sịga ngwugwu, mgbasa ozi na dijitalụ obibi ihe, wdg); ọzọ bụ ịdị ọcha na ịdị ọcha ngwaahịa (metụ akwa, ọzụzụ ogologo ọkpa, adịghị nkọ, n'okpuru mpe mpe akwa, nweta akwa nhicha, wdg)
Anyị na-esi ọnwụ na àgwà ngwaahịa bụ anyị isi competitiveness, na-eso ụkpụrụ nke optimizing ahịa ọrụ na ọhụrụ continuously.to abụ a mbụ na klas enterprise n'ụwa nile.
Site 2016, anyị nwere 5 ụghalaahịa, 77 ọhụrụ nchọpụta Kemịkalụ, 4 Provincial Technology R. & D. Emmepe, gafere mba asambodo ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000, SGS, wdg
Flexo Print System, Rotogravure Print System, Heidelberg dechapụ Print System, David-Standard Lamination System, HL Lamination System, Switzerland LF-IV700 / Kra oku akara System, Full-Automatic Dia-Cutting System, Slitting Machine, Intelligent QC Machine, DH IMAVISION QC, Automatic mbukota & nzipu System
Anyị ụlọ ọrụ nwere ike na-anụ ma na ogologo okwu azụmahịa mmekọrịta ahịa si South Asia, Middle n'ebe ọwụwa anyanwụ, Africa na South America. Ka ọ dịgodị 'Toptac' 'OTAC' edenyere e debara aha anyị ahịa na obodo ahịa ma guzosie ike gị n'ụlọnga na Pakistan.
Anyị ga-atụle ihe ị metụtara, izute ihe ị nwere ike mkpa, Iji inye àgwà ọrụ na ezi uche price nke karịrị nke na-atụ anya nke anyị kpọrọ ahịa. Anyị iwekota ime ihe n'eziokwu, iguzosi ike n'ezi ùgwù na ntụkwasị obi n'ime akụkụ nile nke anyị azụmahịa
701, NO.8 ụlọ, BOJINWAN BEIYUAN, TAIERZHUANG ụzọ, Tianjin, CHINA